IMIBALA YEPEYINTI YEGUMBI LOKUHLALA (IINGCAMANGO ZOYILO) - IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUPHILA
Eyona Iingcamango Zegumbi Lokuphila Imibala yepeyinti yegumbi lokuhlala (Iingcamango zoyilo)
Imibala yepeyinti yegumbi lokuhlala (Iingcamango zoyilo)
Apha sabelana ngolunye lweyona ndawo ibalaseleyo yokupenda imibala yoyilo lwesitayile.
Ixesha elide, i-oatmeal yayingumbala wokukhetha kwigumbi lokuhlala. Iindonga ze-Oatmeal, iifenitshala ye-oatmeal, iirats zerhasi. Sathandana nokungathathi cala kwaye izinto zadika kancinci.
eyona ndawo yokuthenga izihlangu zomtshato
Umbala yenye yezona ndlela zibalaseleyo, ezikhawulezayo, kunye nezona zilula zokuhlaziya igumbi lakho lokuhlala kwaye ulinike ubunjani bobuntu, ewe, uyilo olulungileyo.
Apha ngezantsi sabelana ngeendlela ezahlukeneyo ze imibono yepeyinti yegumbi lokuhlala ukukunceda ufumane umbala ohambelana noluvo lwakho lwesimbo.
Igumbi lokuKhanya eliKhanyayo
Igumbi lokuPinki noMhlophe
Umkhosi wamanzi wamanzi kunye negumbi lokuhlala elimhlophe
Igumbi lokuhlala leCream kunye neGolide
Igumbi lokulala eliNgwevu
Igumbi lokuPhila eliBrown
Itani kunye neBlue Igumbi lokuPhila
Kutshanje igumbi lokuhlala elipeyintwe ngokukhazimlayo sele lidumile ngenxa yemibala yayo ephakamisayo kunye nogxininiso ekubonakaliseni isitayile sakho. Enye indlela yokufumana eli lungelo kukuhamba ngombala oluhlaza okhanyayo. Zama ukudibanisa neepinki, ezimhlophe ezimhlophe ezimhlophe kuyilo olunomtsalane.
Ukuzonwabisa, i-eclectic, i-vibe ye-world vibe, bhangqa i-antique yekhulu leminyaka kwaye ufumane ekuhambeni kwakho ngepinki kunye nomhlophe. Ukuzama ngakumbi ukudibanisa i-pinki kunye ne-turquoise, kunye ne-navy. Umdibaniso wombala onesibindi uqaqambile, uyonwabisa, kwaye uyadlala ngaphandle kwendoda kunye neyasetyhini.
Isofa ye-turquoise yesidiliya, ipapa epinki eqaqambileyo kwi-ottoman okanye eminye imithwalo yokuphosa, kunye nosihlalo ngamanye amaxesha ophindaphindiweyo ngombala woboya eneenkcukacha zomkhosi waselwandle.
Gcwalisa umbala ngakumbi ngezityalo ezinamanzi, indawo enomdla yombhoxo, kunye neefenitshala zomthi ezityebileyo ukulinganisa isithuba. Gcina amakhethini alula kwaye anomoya, into ehlebayo kunye nemhlophe evumela ukukhanya kwendalo kuphuphume kwisithuba.
Isitayela sendlu yekotishi umgubo oluhlaza kunye nomhlophe lukhetho olungaphelelwa lixesha oluhlala luthandeka.
Imibala yegumbi lokuhlala enepeyinti engentla inepeyinti ekhanyayo eluhlaza okwesibhakabhaka ezindongeni nge-wainscoting emhlophe kunye nendawo yomlilo emhlophe enesinxibo. Umbala oqaqambileyo oluhlaza ungeniswa ngokusetyenziswa kwezitulo ezibini zengalo kunye neziqwenga zokuhombisa.
Ukuba isitayela sakho sinobuninzi beManhattan, qwa lasela iqanda elimnyama, elimhlophe kunye ne-robin. Ngokwesiqhelo ubona umbala oqaqambileyo odityaniswe ngumahluko omnyama nomhlophe kodwa ukusebenzisa umbala ohlaza okwesibhakabhaka othambileyo kunika abamnyama nabamhlophe uhlaziyo oluhle.
Paint iindonga zakho iqanda eliluhlaza, eliluhlaza okwesibhakabhaka kwaye usebenzise umbala omnyama nomhlophe wejometri entofontofo kwimpahla yakho ukuze ufumane lo mbono umangalisayo nohlukileyo. Ifenitshala ye-aksenti eyenziwe ngebrashi yentsimbi okanye i-pewter mboleko kunye nepolishi engaphantsi kwayo ekubukekeni ngokubanzi.
Mnyama okanye sisityebi, amabala amdaka ngombala kwimpahla yakho yeenkuni yongeza ubunzima kwaye igcina indibaniselwano ukuba ingaziva inomoya. Qiniseka ukuba ubandakanya ii-accents eziluhlaza okwesibhakabhaka, banokuba nesibindi ngakumbi okanye bangaphantsi, cinga ukuphosa imithwalo, izixhobo zeglasi, okanye umsebenzi wobugcisa.
Ukwenza umhlaba ujongeke, sebenzisa ityhubhu emnyama nendawo emhlophe eleleyo, ungoyiki ukuhamba mnyama ngaphezu komhlophe kwaye uqiniseke ukuba ipateni iyancoma iipateni kwinto yakho yokuhombisa.
Izithuba zotshintsho ziya kuxhamla kakhulu kumdibaniso woMkhosi wamanzi, omhlophe kunye noBrown. Izityebi, ezimnyama Iindonga zomkhosi wamanzi yindlela engalindelekanga yokwenza indawo yakho izive icolile.
igumbi elimfusa negolide
Sebenzisa iinkuni ezityebileyo ezimdaka kumgangatho wakho okanye kwifenitshala. Funda ngakumbi malunga imigangatho ehambelana nomthi kunye nemibala yepeyinti Apha.
Nangona kunjalo, xa usebenzisa umbala omdaka zigcine zilula, cinga iisofa ezinesakhelo kunye nezitulo, hayi ubunzima, iimpahla ezinobunzima eziya kuthi zongamele indawo yakho.
Iminyaka esi-8 isikhumbuzo semibono
Ukwenza izinto zangaphezulu, yigcine ingathathi hlangothi, imvelaphi yekrimu eneeprints ezinomdla kwi-greige kunye neepopu ezincinci zeetoni ezibomvu kunye neblues.
Yenze lula ngombhoxo onemigca ethambileyo engwevu nomhlophe okanye usebenzise irugi endala egugileyo yasePersi ukuzisa imeko yakudala kwindawo yakho. Eli ligumbi elicela ukuba ubambe imagi yeti, uziphose kwisitulo sakho osithandayo, kwaye ulahleke kwihlabathi lencwadi oyithandayo.
Gcina ingobozi egcwele iingubo zokuthambisa kufutshane nendawo yokuhlala enkulu kwaye uqiniseke ukuba usasaza iitafile ezisecaleni malunga nendawo yeendawo ezifanelekileyo zokubeka iiggs zakho kunye neepleyiti zokutya okulula. Umdibaniso wombala ukhululekile, uqhelekile, kwaye udlala kakuhle kwimpahla yanamhlanje neyesiko.
Sibona igolide eninzi iphuma kuyo yonke indawo kwezi ntsuku, ukusuka kwigumbi lokubonisa ukuya kwiivenkile ezinkulu zebhokisi, igolide ikho yonke indawo. Umbala onokuhamba nayo nayiphi na into kodwa ujongeka umangalisa ngakumbi ngeetoni ezishushu, ezimemayo.
Inkangeleko inokuba nzima kwaye ibe nomhla ukuba ayenziwanga ngesandla esikhanyayo. Gcina isiqwenga sakho esikhulu esiphakamileyo esingathathi hlangothi, iithunzi zeamangile kunye nokhilimu zikhangeleka apha. Ngobunewunewu obongezelelweyo begolide ene-orenji etshisiweyo, ispice semibala okanye imibala kunye neorenji ezitshileyo ukuze ufumane umbala.
Phonsa imithwalo, ii-draperies, kunye nesihlalo sakho ngamanye amaxesha okanye i-settee ufumane unyango olutshisayo lweorenji. Yiya kunye neepateni okanye imitya emihle yelaphu le-bark yeediliya.
Yizisa igolide kunye netafile yekofu enesakhelo segolide. Kwakhona jonga ukuphosa imithwalo enokuthinta igolide kwilaphu, kancinci kuhamba indlela ende.
Eli lixesha lokuba usebenzise loo mbala umhle ongathandekiyo onombala weflokati obukhe walijonga. Dweba ingubo enithiweyo enqamlezileyo kwisitulo sakho sengalo ukuze ugqibezele iimvakalelo.
Ngwevu ngumbala odla ngokubonakaliswa kuyilo lwamagumbi okuhlala lwangoku ngokubonakala kwawo okunesitayile kunye nobunkunkqele. Nangona kunjalo, inokwenza ngokulinganayo kakuhle xa idityaniswe nokubumba okumhlophe kunye nokucheba ukwenza ukuziva okungokwesiko.
Kuba ingwevu ngumbala ongathathi hlangothi inokudityaniswa ngempumelelo kunye neendlela ezahlukeneyo zokukhawulezisa kunye neziphumo ezilungileyo. Olunye udibaniso oludumileyo lubandakanya ukudibanisa ngwevu ngombala oluhlaza, oluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama, opinki kunye nomdaka.
UBrown ngumbala oguqukayo kwigumbi lokuhlala kwaye unokutshatisa iintlobo ezahlukeneyo. Imibala emdaka ingasetyenziselwa umtsalane we-rustic, uyilo lwendabuko okanye lwangoku ngokuxhomekeke kwimpahla yakho kunye nokuhombisa.
Ngelixa umbala omdaka ibingumbala othandwayo unokuba buthuntu ukuba awudibananga neminye imibala ukuze ukhanyise indawo. Imibala yokuncoma oza kuyisebenzisa ngombala omdaka ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, i-pastels, tyheli, luhlaza nemfusa, ukubala nje ezimbalwa.
Cinga ngaphaya kokungathathi hlangothi, mema iiblues ezimnyama kunye neepinki eziqaqambileyo kunye nemifuno kwindawo yakho. Isandi ngegolide kunye nepewter. Umbala yindlela elungileyo yokuhlaziya indawo yakho, ngakumbi ukuba ubuyela kwiklasi yakho yobugcisa kunye nevili lemibala.
Ukubamba a ivili lombala kwaye ufumane umbala owuthandayo, emva koko ufumane ukuba yeyiphi imibala eyahlukileyo okanye uyincomayo kwaye uya kufumana indibaniselwano yombala ekusebenzela.
imibono yegumbi laseparis
Ukusuka emerald kunye nomnyama ukuya kwipikoko, igolide, kunye nengwevu, uya kufumana umbala omdaka kwigumbi lokuhlala imibala yepeyinti eyongeza ukuntsokotha, ulonwabo kunye nezinto zoyilo olufanelekileyo kwisithuba sakho.
Isoftware yobeko lwekhabhinethi
Iposi yesiqithi sasekhitshini
uyifumana phi iringi ebhalwe
izimvo zobeko lwendlu yangasese
Iitemplate zenkqubo yomtshato yasimahla yelizwi
Ixabiso lekhonkco ledayimani eli-7
Zonke iiphakheji zomtshato ezibandakanyayo mexico